के जेल जाने नै भए त पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित र नायिका केकी अधिकारी ? – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityके जेल जाने नै भए त पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित र नायिका केकी अधिकारी ?
December 23, 2017 Keshab Khadka Celebrity, Entertainment, Kollywood 0
काठमाडौं पुस, ८–
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन जितेर अत्याधिक चर्चामा आएका एमाले नेता लालबाबु पण्डित जेल जान सक्ने सम्भावना बढेको छ । लालबाबु मात्र होईन नेपाली सिने जगतकी चर्चित नायिका केकी अधिकारीलाई पनि उहि जेल जान सक्ने समस्याले छोएको देखिन्छ । केही समय पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर चर्चा कमाएका पण्डितले एक जना नायिकाको अफरलाई नाई नास्ती गर्न नसक्दा जेल जाने सम्भावना बढेको हो ।
केही दिन पहिले विराटनगरमा भएको एउटा सिनेमा सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री भएका बखत गरेको कामले चर्चा कमाएका नेता पण्डितले नायिका केकी अधिकारीको अनुरोधमा एक हजार रुपैंयाको नोटमा अटोग्राफ भरिदिएका थिए । मन्त्री भएर चर्चा बटुलेका पण्डित रुपैंयामा केरमेट गर्नु हुदैन भन्ने कुराको जानकार थिएनन् र ? उनले १ हजारको नोटमा केरमेट गरेर सफा नोट नीतिको धज्जी उडाउन समेत पछि परेका छैनन् ।
पूर्वमन्त्री पण्डितले मात्र हैन, नायिका केकी अधिकारीले सफा नोट नीतिविरुद्ध १ हजार रुपैयाँको नोटमा केरमेट गराएकी छन् । पण्डितलाई देख्ना साथ नायिका केकीले आफूमा लालबाबुप्रति अत्याधिक क्रेज रहेको भन्दै हजारको सो नोटमा लालबाबुको अटोग्राफ लिएकी थिईन ।
नेता पण्डितले उक्त कार्यक्रममा केकीको अनुरोधमा १ हजार रुपैयाँको नोटमा केरमेट मात्र गरेनन् अभिनेत्री केकी सुन्दरताको पनि भरपुर तारिफ गरेका थिए ।
सर्वोच्चले बैंक नोटमा स्टिच नगर्न, केरमेट नगर्न र जथाभावी च्यात्न नपाउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
बानेश्वरकी चाउचाउ बज्यैः जसको स्वाद पूर्व युवराज पारसदेखि राजनीतिक नेता र फिल्म कलाकारले समेत छोडेनन् (भिडियो सहित)